Burger Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘာဂါ
ဘာဂါ APK ကို
တစ်ဦးကဘာဂါ-်ထမ်းဆောင်ဂိမ်းကျောက်မိုဘိုင်းရဲ့ touch နဲ့အခမဲ့ဗားရှင်း၌သင်တို့၏အကောင်းဆုံးခံစားဘို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်!
သငျသညျကိုယျအဘို့ငွေနှင့်ပင်အကြံပေးချက်များဝင်ငွေတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် client များအစေခံတစ်ဦးကွင်းဆက်စားသောက်ဆိုင်အတွက်ငှားရမ်းထားနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အမိန့်ကို ယူ. အသားညှပ်ပေါင်, အပါအ, အချိုပွဲများနှင့်ဆိုဒါတွေအကြားတစ်ဦးစာရွက်ပါစေ။ ပိုငျသညျ, play ပိုပါဝင်ပစ္စည်းများလျင်မြန်စွာအစားအစာပူးတွဲပေါ်လာလိမ့်မည်!
စိန်ခေါ်တက်ယူနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအခက်အခဲနှင့်အတူယခုနှစ်နေ့ရက်တိုင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အလုပ်ရှာဖွေရေး Mode ကိုကြိုးစားပြီး!
အချိန်ကိုကန့်သတ်အတွင်းဒင်္ဂါးပြား၏အမြင့်ဆုံးပမာဏကိုစုဆောင်းဖို့အချိန်တိုက်ခိုက်မှု Mode တွင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ!
- မုန့်, အသားများနှင့်ဆလတ်နဲ့တူကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးကတပြင်လုံးကိုအများကြီး
- ဘာဂါအရူးများအတွက် 300 အဆင့်ဆင့်ထက်ပိုမိုနှင့် 40 အောင်မြင်မှုများ
- ရေခဲလိမ်းဆေး, ပြင်သစ် fries နှင့် muffins တူသောအတော်များများဘေးထွက်ဟင်းလျာများ
- ထိုပြခန်းနှင့်သင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း Share
ဒါကြောင့်ဘာဂါ play နှင့်ဘာဂါ၏မာစတာညျရှငျဘုရငျဖွစျလာလာ,
အန်းဒရွိုက်9အသုံးပြုပုံများ
9.46 ကို MB
ဘာဂါဆိုင်2- ...